Shiinaha DR-23 kamarad sawir-qaade kuleylka ah soo-saar iyo Warshad | Dianyang
Waxtarka ogaanshaha iyo heerka otomaatigga ee nidaamka baarista heerkulka infrared kuleylka infrared wuxuu aad ugu habboon yahay baaritaanka heerkulka jirka ee degdegga ah ee garoomada diyaaradaha, isbitaalada, tareenada dhulka hoostiisa mara, saldhigyada, shirkadaha, dekedaha, xarumaha laga dukaameysto iyo munaasabadaha kale ee socodka badan leh. Waqtigaan la joogo, maahan oo keliya garoomada diyaaradaha, saldhigyada iyo dockyada isticmaala heerkulbeegga infrared-ka buuxa ee caqliga u ah qalabka caadiga ah ee kahortagga cudurrada faafa, laakiin iskuulo badan, suuqyada waaweyn, jaaliyadaha iyo shirkadaha ayaa sidoo kale adeegsada heerkulbeegyada infrared infrared sida baaritaanka heerkulka iyo aaladda ka hortagga cudurrada.
Iyada oo leh awood xisaabinta gees leh oo awood leh, aqoonsiga wajiga waxaa lagu ogaan karaa gudaha iyada oo aan lagu tiirsaneyn serverka.
Edge xisaabinta ayaa si toos ah u shaandheeya una falanqeeya xogta aaladaha terminal-ka, wuxuu yareeyaa cadaadiska qarxinta xogta iyo taraafikada shabakadda, wuxuuna leeyahay tamar-badbaadin sare iyo waqti-badbaadin waxtar leh
Aqoonsiga wajiga otomaatiga ah uma abuuri doono digniin been ah barta aan kulul ee aadanaha ee heerkulka sare oo laga fogaado faragelinta walxaha kale ee heerkulka sare leh. Iyadoo la adeegsanayo dareemayaal la soo dhoofiyay oo xirfad leh, 0.02 ilbiriqsi dhakhso leh
Sawirka kuleylka ee dhamaadka-sare wuxuu leeyahay xawaare sare oo ah 50 Hz. Xawaaraha ogaanshaha wejiga waa 15 wareeg halkii labaad. Xariiq kasta wuxuu aqoonsan karaa 10 qof isla waqtigaas. Shaqada baaritaanka heerkulka si dhakhso leh ayaa loogu soo gabagabeyn karaa aagga ay dadku ku badan yihiin si loo hubiyo waxtarka sare iyadoo aan la waayin bartilmaameedka kululaynta.
In ka badan 37.3 alarm alaarmiga otomaatiga ah, barnaamijku wuxuu si otomaatig ah u soo qaadaa sawirka la cabbiray
Nidaamku wuxuu dejiyaa 37.3 ℃ sida qiimaha alaarmiga heerkulka sarreeya asal ahaan. Waxay si otomaatig ah u qaban doontaa qiimaha heerkulka ee ka sarreeya 37.3 ℃ waxayna siin doontaa cod iyo digniin midab leh. Waxay si otomaatig ah u calaamadeyn doontaa xogta heerkulka aan caadiga ahayn ee ka dhex jirta qalabka kormeerka, qabashada sumadda otomaatigga ah, iyo keydinta sawirka degdegga ah iyo qiimaha heerkulka.
Tirakoobka otomaatiga ah ee tirada baaritaanka iyo nambarka qandhada
Waxay taageertaa aqoonsiga wejiga tooska ah, waxay si otomaatig ah u miiraysaa ilaha kale ee kuleylka marka laga reebo jirka aadanaha, waxayna tirisaa tirada dadka cabbira heerkulka. Waxay si sax ah oo hufan u dhameystiri kartaa shaqada kormeerka ee jawiga cakiran sida xarunta tareenka, garoonka diyaaradaha, marinka dhulka hoostiisa mara iyo wixii la mid ah.
Si aad waxbadan uga ogaato sababta loogu baahan yahay qof madow in lagu ogaado qandhada COVID-19 xalka habka imaging imaging, fadlan booqo Mareeykanka Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka ee Mareykanka (FDA), oo ka raadi "blackbody" cinwaanka hoose:
l Kaameradda kuleylka kuleylka ah ayaa si otomaatig ah u cabbiri karta jirka bini'aadamka iyada oo aan wax qaabeyn ah lahayn, dhib malahan wajiga wajiga ama la'aantiisa.
l Dadku waxay marayaan uun joogsi la'aan, nidaamku wuxuu ogaanayaa heerkulka jidhka.
l Iyada oo qof madow si otomaatig ah loogu cabbiro kaameradda sawir-qaadaha kuleylka, oo si buuxda ugu hoggaansan shuruudaha FDA.
l Ethernet iyo dekedda HDMI oo ku saleysan SDK; macaamiisha ayaa horumarin kara barnaamij u gaar ah barnaamijka.
l Si otomaatig ah dadka u qaado sawirro una duub cajaladaha digniinta ah marka ay heerkulka dadku ka sarreeyo marinka.
l Sawirada digniinta iyo fiidiyowyada si toos ah ayaa loogu keydin karaa disk-ka USB-ga ah.
l Taageer qaababka muuqaalka muuqda ama isugeynta.
Kameradda DR-23 Dual Spectrum Thermal
Qeexitaanka ayaa lagu muujiyay hoos,
Kaameradda sawir-qaadaha Qaraarka 80x60
Qiyaasta cabirka 10 ° C ~ 50 ° C (50 ° F ~ 122 ° F)
Saxsanaanta 0.3 ° C (± 5.4 ° F)
Cabir masaafada 3 mitir
Cabir heerkulka Cabbiraadda heerkulka wajiga oo otomaatig ah oo ku saleysan aqoonsiga wajiga
Kaamirada muuqda Qaraarka 1080P
iftiimin 0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)
Magdhawga dhabarka La taageeray
Qaylada dhijitaalka ah 2D & 3D yareynta buuqa
Guud Qaabeynta IP DHCP ama cinwaanka IP-ga oo taagan
Qaybta heerkulka Celsius, Fahrenheit
Isdhaxgalka Ethernet (RJ45)
Heerkulka shaqada + 10 ° C ~ + 50 ° C （50 ° F ~ 122 ° F）
Heerkulka keydinta -40 ° C ~ + 85 ° C (-40 ° F ~ 185 ° F)
Heerka ilaalinta IP54
Cabir 129mm x 73mm x 61mm (L x W x H)
Fuulay 1/4 "godka sii kordhaya ee dhoofinta
Software AI Aqoonsiga wajiga
Qiyaasta Heerkulka Cabirka heerkulka aqoonsiga wajiga otomaatiga ah
Alaarmiga Qaylo-dhaanta codka kamaradda, kombiyuutarka ama TV-ga
Sawir Sawir otomaatig ah marka digniinta ama gacanta lagu sawiro
Video Duubista fiidiyowga oo otomaatig ah marka alaarmiga ama gacanta lagu duubo gacanta
Luqadda Shiine, Ingiriis, Jabaaniis (luqad kale waa la habeyn karaa)
Qiyaasta cabirka + 5 ° C ～ 50 ° C （41 ° F ~ 122 ° F）
Cabbirka oogada Ballaca 25 mm
Xasaasiyad 0.95 ± 0.02
Saxsanaanta 0.1 ° C (0.18 ° F)
Xasiloonida <± 0.1 ° C (± 0.18 ° F)
DC 5V (soo jeedi adabtarada 5V 2A, adabtarada ijaarka 5V 1A)
Heerkulka shaqada Heerkulka 0 ° C ～ 50 ° C （32 ° F ~ 122 ° F）
Qoyaan ≤90% RH
Cabirka Qalabka 53 x 50 x 57mm
Isticmaalka awoodda Celcelis ahaan 2.5W
Muuqaalka iyo Is-dhexgalka
Kaamirada sawir qaadista kuleylka ah ee DR-23 ayaa ka hooseysa is dhexgalka,
1080P kamarad muuqata bixi sawir muuqda oo kamaradda ah
kamarad sawir-qaade sii sawir kuleylka kaameradda
LED cagaaran Iftiiminta: kamaraduhu si caadi ah ayey u shaqeeyaan
Iftiiminta LED-ka: kamaraduhu waxay u shaqaysaa si aan caadi ahayn ama koronto la'aan
Dhamaan midabada midabada leh waxay leeyihiin 3 qaabab wanaajinta muuqaalka oo kala duwan oo u dhigma walxaha iyo bey'adaha kala duwan, macaamiisha ayaa dooran kara inay muujiyaan walxaha ama tafaasiisha asalka.
DC 12V sii DC 12V kamaradda
Ethernet kumbuyuutar ku xiro kamarad, wuxuu kula shaqeyn karaa HDMI isku mar
HDMI xiriiri HDMI TV ama bandhig, wuxuu la shaqeyn karaa Ethernet isku mar
USB 2.0 kaydso sawirada alaarmiga iyo fiidiyowyada markii aad ku xirmayso kaliya TV ama bandhig
RS485 Hada lamaheli karo
Alaarmiga si loogu xiro qalabka dibedda iyo qalabka digniinta iftiinka (ma bixin karo koronto)
Safka ku jira Hada lamaheli karo
Badhanka xakamaynta Qaabdhismeedka kamaradda iftiinka muuqda (aasaaska ayaa ku filan xaaladaha badankood)
Awoodda LED Iftiiminta: awoodda kamaraddu waa caadi
Iftiiminta LED-ka: awoodda kamaradu waa wax aan caadi ahayn
Isku-xirka barnaamijka ayaa lagu muujiyey hoosta, waxaan soo jeedinaynaa qaabka la arki karo si dadka loo arko,
Hawlaha barnaamijka ayaa lagu muujiyay hoos,
Habka fiidiyowga hab muuqda
Sawir oomaatig ah sawir wejiga marka heerkulku ka sarreeyo marinka, oo muuji qiimaha heerkulka.
sawir badbaadin gacanta
Video duubo fiidiyow otomaatig ah marka heerkulku ka sarreeyo marinka
video duuban gacanta
Alaarmiga Deji qiimaha marinka digniinta
Qalabka digniinta dhawaaqa kamaradda
Qalabka digniinta ee kombuyuutarka
SDK Ethernet ku saleysan SDK ee horumarinta labaad ee macaamiisha
Liiska Qalabka Qaabka fudud
Maya Nooca Faahfaahinta Qty. Tacliiq
1 DR-23 Dual spectrum kamarad sawir-qaade kuleylka ah Xallinta kamaradda 1080P, xallinta kuleylka 80´60 1 Qaabeynta caadiga ah
2 B03 Jirka madow + 5 "50 ℃ （41 ° F ~ 122 ° F", dhexroor dhererkiisu yahay 25mm 1 Qaabeynta caadiga ah
3 B03 fiilada korantada madow 1 Qaabeynta caadiga ah
4 Qaybta farsamada Si aad uhesho madow-DR-23 iyo B03 1 Qaabeynta caadiga ah
5 Software 1 Qaabeynta caadiga ah
6 DR-23 tripod 1.8 - 2 mitir 1 ikhtiyaari ah
7 HDMI TV ama bandhig 1 ikhtiyaari ah
8 USB disk Qaab FAT32 1 ikhtiyaari ah
9 Adabtarada leh dekedda USB DC5V 2A ama 1A 1 ikhtiyaari ah
1.2 Liiska Qalabka Qalabka Kombiyuutarka
6 Kumbuyuutar I3 processor, 4G DDR,
1 ikhtiyaari ah
7 DR-23 tripod 1.8 - 2 mitir 1 ikhtiyaari ah
8 Adabtarada leh dekedda USB DC5V 2A ama 1A 1 ikhtiyaari ah
Hore: M640 module infakshanka kuleylka ah
Xiga: Kameradda Sawirka Dabiiciga ah ee DP-32